Ukuthwala iZilayidi zeDraw zeBhola
Iihenjisi zesitovu kunye nezinto ezincedisayo
Iimveliso zethu zithengiswa phantsi kweempawu ezintathu ezaziwa kakhulu: YANGLI, GERISS, HIFEEL. Ziyinkqubo yedrowa, iZilayidi ezifihliweyo, iZilayidi zokuthwala ibhola, iZilayidi zeTafile, iihenjisi ezifihliweyo, izibambo, iihenjisi zeoveni nezinye izinto zefanitshala zefanitshala, ezisetyenziswa kwifenitshala, iikhabhathi, izixhobo zasekhaya njl.
37-540mm Double Indlela Ex Full ...
37-230 mm ulwandiso olupheleleyo ...
35mm Ulwandiso olunye lwe-2-Fol ...
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 430 square ...
Isitovu segesi Isitovu sesitovu ...
Ulwandiso olupheleleyo lweSoft-Vala ukuThoba iSilayidi seKhabhathi yeeKhabhathi ezingenasiphelo
Ulwandiso olupheleleyo-olusondeleyo lokuvala isilayidi sedrowa yeekhabhathi ezingenasiseko- ibhodi yeedrowa eziyi-16mm zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33A
Ulwandiso olulodwa oluValiweyo oluValiweyo lokuThoba iSlide yeSilayidi esineeScrew eziguqukayo kunye neeplagi zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Ulwandiso olupheleleyo lweCala eliPhezulu eliShiyiweyo lokuValwa kweNgcingo yeSilayidi
Isilayidi esigcweleyo esinyusiweyo sokuVala okuValiweyo kweBhasikidi yeSilayidi esiqhelekileyo isebenzisa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lwesilayidi sokusebenzisa isilayidi sokusetyenziswa ukulungisa idrowa yebhasikiti. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Ukuthula okungavaliyo okusondeleyo kwehlisa idrowa efihliweyo yolwandiso olupheleleyo kunye neeklip zangaphambili zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi sokusebenzisa izilungisi zangaphambili ukulungisa iidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Ulwandiso olulodwa oluValiweyo oluValiweyo lokuThoba iSlide yeSilayidi kunye nezihlanganisi zangaphambili
Ulwandiso olulodwa oluValiweyo oluValiweyo lokuThoba iSlide yeSilayidi kunye neziQhagamsheli zangaphambili zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi sokusebenzisa izilungisi zangaphambili ukulungisa iidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Ulwandiso olupheleleyo oluHambelanayo oluHambayo oluValiweyo oluValiweyo lweMbaleki ene-3D ngaphambili
Ulwandiso olupheleleyo oluhambelanayo lokuvala imitha efihliweyo yembaleki ene-3D ngaphambili kwizibiyeli zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi sokusebenzisa izilungisi zangaphambili zilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Ukuthengisa okutsha kwe China Izahlulo zeNdawo yokuCwangciswa kweNdawo yeOven Door kwiihenjisi
Intshayelelo: Indlebe yokupheka i-oveni yendlu yokupheka ihenjisi yomnyango okhohlo kwaye icala lasekunene ngamacala amabini. Ihenjisi lokusetyenziswa kweengcango zokupheka nge-oveni yokupheka. Izixhobo zeGeriss zilungele umzi, umzi-mveliso kunye ne-oveni yombane, ngakumbi kuhlobo lomnyango onobunzima obuyi-3 KGS-15 KSGS ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Inombolo yomzekelo: YL-01
I-37mm isandiso sesilayidi esiphakamileyo / esithathu esenziwe ngetafile yesilayidi
I-37mm isandiso esigcweleyo / kathathu solwandiso lwe-telescopic ye-bayonet yokukhwela isilayidi esiveliswe yimveliso yokuchaneka okuphezulu kunye nezixhobo zokuvavanya iimveliso ezisebenza ngokuthula-ngokuthula nangokugudileyo. Malunga nebhola yesilayidi sedrowa yethu enobubanzi obahlukeneyo be-17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Ubude sinako ngokweemfuno zakho ukuvelisa. Ukuba unomdla kumajelo ethu e-telescopic, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: YA-3703
I-37-230 mm yebhokisi yezixhobo ezandisiweyo zebhokisi yekhabhathi yebhola ethwele isilayidi yentaba yokukhwela
I-37-230 mm ibhokisi yolwandiso olupheleleyo ibhokisi yekhabinethi ethwele i-bayonet mount drawer slide eveliswe ngumgangatho ophezulu wokuvelisa imveliso kunye nezixhobo zokuvavanya iimveliso ezisebenza ngokuthula nangokuthula. Malunga nebhola yesilayidi sedrowa yethu enobubanzi obahlukeneyo be-17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Ubude sinako ngokweemfuno zakho ukuvelisa. Ukuba unomdla kumajelo ethu e-telescopic, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: YA-37HK-230
I-37-540mm iNdlela ephindwe kabini yoLwandiso olupheleleyo lweBayonet Mount Ball Ukuthwala iBhokisi yezixhobo yeSilayidi
I-37-540mm indlela ephindwe kabini yolwandiso lwe-bayonet mount ball bearing bearingbox drawer slide eveliswe ngomgangatho ophezulu wokuvelisa imveliso kunye nezixhobo zokuvavanya iimveliso ezisebenza ngokuthula nangokuthula. Malunga nebhola yesilayidi sedrowa yethu enobubanzi obahlukeneyo be-17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Ubude sinako ngokweemfuno zakho ukuvelisa. Ukuba unomdla kumajelo ethu e-telescopic, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: YA-37HK-540
Ulwandiso olupheleleyo lwentaba PUSH UKUVULA izilayidi zedrowa ngesixhobo sokutshixa
Ulwandiso olupheleleyo lwentaba PUSH UKUVULA izilayidi zedrowa ngesixhobo sokutshixa esiqhele ukusetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi sokusebenzisa isixhobo sokutshixa isixhobo kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umzekelo No .: I-EUR33D
Ulwandiso olupheleleyo lokuvula phantsi kwezilayidi zedreyini enezikhonkwane ezihlengahlengisiweyo zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokujongela phantsi isilayidi usebenzisa izikrufu ezinokuhlengahlengiswa kunye neeplagi zeplastiki ezilungisa kwiidrowa zomthi. Ukuba ngumatshini we-TAIWAI othe ngqo, ngombono woyilo oluphezulu iqela lethu lobuchwephesha lenze ngononophelo kwaye liphethe izixhobo ze-GERISS ezizezona zikhethekileyo iinkampani zefanitshala zehlabathi.
Umnxeba: + 86-21-66368006